Golaha Shacabka oo ansixiyay in Gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho Aqalka Sare – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka matalaada Gobolka Banaadir uu ku yeellanayo Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
146 mudane ayaa soo xaadirtay fadhigii maanta, waxaana xeerka u codeysay 142 mudane, halka 4 xildhibaanna ay ka aamuseen. Xeerka maanta la ansixiyay ayaa dhigaya in Gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho Aqalka Sare.
130 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkii hore saxiixay mooshin cusub, kaas oo u jeedkiisu uu yahay in Gobolka Banaadir uu Aqalka Sare ku yeesho 13 kursi.
Guddiga wada-jirka ah ee dhammeystirka xeerarka Doorashooyinka Qaranka, ayaa dhowaan ku taliyay in Gobolka Banaadir uu 7 kursi ku yeesho Aqalka Sare, waxaana dooda ku saabsan arrintaasi ay wali hortaallaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka.
Xildhibaanno ka tirsan Golaha oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in shacabka reer caasimada ay usoo hoyatay guul aad u weyn madaama ay matalaad ku yeellanayaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye Xaliima Yarey oo maanta hortageysa Baarlamaanka